दिन: 23 नोभेम्बर 2019
23 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 0
टीसीडीडी यातायात अधिकारीहरू र उत्तरी म्यासेडोनिया रेल यातायात एएस (ZRSM) को गणतन्त्रका अधिकारीहरूले अन्कारामा भेट गरे। दुई देशको रेलवे बीच विद्यमान सहयोग सम्बन्ध मूल्यांकन गर्न र बढाउन एक बैठक आयोजित गरिएको थियो। [अधिक ...]
3 रातारात Vasıf arnar Street मा। पट्टी; बाल्केशिर महानगरपालिकाले शहरको मुख्य धमनीमा यातायात घनत्व कम गर्न वासफ Çıनर सडकमा काम जारी राख्यो। Balıkesir महानगरपालिका नगरपालिका Yücel Yılmas [अधिक ...]
Eskişehir मा ट्राम ट्रस कामको कारण सडकहरू ट्राफिकमा बन्द हुने छ
सडकहरू ट्राफ कैंची द्वारा Eskişehir मा यातायात बन्द गर्न; गाजी याकप सातार स्ट्रीट एक्सएनयूएमएक्स, जुन हालै येलद्ज ट्राम जंक्शनमा कैंची जडानका कारण बन्द गरिएको थियो। [अधिक ...]
शिमशोन हाई स्पीड मार्गको घोषणा गरिएको छ; शिमशोन Çorum Kırıkkale उच्च गति लाइन निर्धारित गरीएको छ कुन स्टेशनहरू रोकिन्छ। ट्रेनले शिमशोनको 24 स्टेशनमा यात्रीहरूलाई डाउनलोड र बोर्ड गर्ने छ। परियोजना यातायात मन्त्रालय र द्वारा पूरा गरीएको छ [अधिक ...]
ट्राम मेट्रोको साथ मर्सीनमा आउछ
ट्राम मेट्रोको साथ मर्सीनमा आउँदछ; मर्सन महानगरपालिका नगरपालिकाका मेयर वाहप सेयर अज्मिरमा उनको पार्टीले आयोजना गरेको "ब्रदर सिटीज, समकालीन शहरी" बैठकमा भाग लिए। शिविरमा 252 मेयर Seçer, इस्तानबुल, [अधिक ...]
'साइकल कार्यशाला' मर्सनमा आयोजना हुनेछ
'साइकल कार्यशाला' मर्सनमा आयोजना गरिनेछ; मर्सन महानगरपालिकाले साइर्सको प्रयोगलाई बढी सहज, सुरक्षित र सहज वातावरणमा मार्ग प्रशस्त गर्न मर्सिनको प्रयासमा नयाँ थप्दै छ। ग्रेटर नगरपालिका, मर्सन विश्वविद्यालय [अधिक ...]
कोकाली मेयर एसोसिएट डा ताहिर बेय्याकाकान कोकालिस्पोर आइतबार सामना गर्नेछन्। खेलको लागि एसेलर ईरोक्सपोर एक्सएनयूएमएक्स जिल्ला स्टेडियमको सीधा पहुँच प्रदान गर्न आदेश दिए। शहरबाट स्ट्याडियममा ट्रान्सपोर्टेशन [अधिक ...]
Sapanca Kırkpınar Teleferik प्रोजेक्ट वर्क्स स्टप
Sapanca Kırkpınar Teleferik परियोजना निर्माणहरू रोकिरहेको छ; साक्रीया एकरेम योसको मेयरसँगको सार्वजनिक बैठकमा, एउटा समाधान आयो: biz हामी तपाईलाई के चाहन्न भन्ने होइन। हामी समाधान बाहिर काम गर्नेछौं। हामी काम रोक्ने छौं। ” Sapanca [अधिक ...]
Düzce को उदासीन ट्राम कहाँ जान्छ?
Düzce को उदासीन ट्राम कहाँ जान्छ ?; ट्राम, जो इजबुल सडक पेडेस्ट्रियानेशन परियोजनाको दायरा भित्र डज पूर्व मेयर मेहमेट केलेले निर्माण गरेका थिए, नयाँ मेयरले निर्माण गरेका थिए। फारुक Özlü रेलहरू इतिहास विच्छेद गरियो। ठिकसँग [अधिक ...]
24 नोभेम्बर शिक्षक दिवस विशेष छुट र अभियानहरू
24 नोभेम्बर शिक्षक दिवसका लागि विशेष छुट र अभियानहरू; प्रत्येक वर्ष, एक्सएनयूएमएक्सले शिक्षकहरूलाई आफ्नो मर्यादा फिर्ता लिन मद्दत गर्न एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमहरू सेट अप गर्दछ, जुन नोभेम्बरमा प्रशंसा गरियो तर समाधान हुन सक्दैन। [अधिक ...]
संसदीय एजेन्डामा Eskşehir का लागि YHT Embargo
Eskşehir मा YHT एम्बेर्डा एजेन्डा; CHP Eskişehir उप UtkakkurÇzer, उच्च स्पीड ट्रेन (YHT) Eskişehirliler संक्षिप्त लाइन संबन्धित संसदीय आरोपहरु को एजेन्डा मा लागू गरीयो। अंकारा-इस्तानबुल लाइन आंकराबाट एस्कीसेहिर [अधिक ...]